Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्डमा उपयोगी उपकरणहरू
Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्डमा मुख्य कार्यहरू सम्पन्न गरियो
Semalt DSD का कम्पोनेन्टहरू
कुनै पनि स्मार्ट मार्केटरको टूलबक्समा, त्यहाँ सेक्सनहरू छन् र त्यहाँ उपकरणहरू छन् जुन तपाईंलाई विश्लेषणको लागि त्यो जानकारी व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ। एसईओमा, सेक्सनहरूको प्रयोग आवश्यक छ किनभने यसले तपाईंलाई तपाईंको खोजी ईन्जिन अनुकूलन प्रयासहरूको लागि ड्रिल गर्न अनुमति दिन्छ र तिनीहरूलाई पूर्व निर्धारित लक्ष्यहरूको बिरूद्ध मापन गर्दछ। तपाइँको कामको फोकसको रूपमा खोज इञ्जिनहरूलाई दिमागमा राख्नु पनि आवश्यक छ। खोज ईन्जिन बिना, तपाईं धेरै टाढा छैन। एसईओ प्रदर्शन कुनै पनि एसईओ अभियानको जीवन रेखा हो र यो महत्त्वपूर्ण छ कि यो तपाईंको कामको क्रममा दिमागमा राख्नुहोस्।
एक SEO ड्यासबोर्ड तपाइँको एसईओ गतिविधि को कई वर्गहरु मा तोड्न सक्छ ताकि तपाइँ समय संग आफ्नो प्रगति विश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ। सब भन्दा आधारभूत ड्यासबोर्ड तपाइँको सब भन्दा हालको गतिविधिहरु को एक सारांश समावेश छ। तपाईं तल विभिन्न पृष्ठहरूमा ड्रिल गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै भर्खरको पृष्ठ सबमिशनहरू, लिंक निर्माण, सामग्री सबमिशनहरू, र पृष्ठ अनुकूलन। जबकि माथी तपाईंको एसईओ प्रदर्शनको छिटो स्न्यापशट प्राप्त गर्न उपयोगी छ, अधिक विस्तृत विश्लेषण सामान्यतया सिग्मेन्ट ड्यासबोर्डहरू प्रयोग गरेर गरिन्छ।
मानौं तपाईंसँग एउटा साइट छ जुन विशेष कुञ्जी शब्द वा वाक्यांशको लागि अनुकूलित गरिएको छ। जब तपाईं यो सेक्सनमा ड्रिल गर्नुहुन्छ, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि तपाईंसँग धेरै विज्ञापन समूहहरू एकै समयमा चल्दैछन्। यदि तपाईं केवल सीधा परिणामहरूको सर्तमा तपाईंको साइटको प्रदर्शन देख्नुहुन्छ भने, तपाईंले गर्नुभएका केही अप्टिमाइजेसनहरू हराउनुहुन्छ। यदि तपाईं सम्पूर्ण साइट हेर्नुहुन्छ भने, तपाईं व्यक्तिगत पृष्ठ र मुख्य वाक्यांशहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रत्येकको तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंको अनुकूलनको गहन दृश्य पाउनुहुनेछ। यहाँ प्रमुख कार्यहरू छन् जुन तपाईंले Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्डमा गर्न सक्नुहुनेछ।
२. मुख्य कार्यहरू Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्डमा पूरा गरियो
तपाईं Google SERP र TOP पृष्ठहरूमा तपाईंको वेबसाइट स्थिति ट्र्याक गर्न यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं यसलाई आफ्नो ग्राहकहरूको वेबसाइट स्थिति देखाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँ यसलाई प्रतिस्पर्धी विश्लेषण उपकरणको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई निगरानी गर्न, उनीहरूको मार्केटि strategy रणनीति अवलोकन गर्न, उनीहरूको ट्राफिक-ड्राइभि driving कुञ्जीशब्दहरू जाँच्न, र उनीहरूको एसईओ प्रदर्शनमा भइरहेको अन्य चीजहरू।
तपाईं Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ विस्तृत वेबसाइट विश्लेषण गर्न। यस ड्यासबोर्डमा, तपाईं प्राविधिक लेखा परीक्षण, चोरी चोरी, गति परीक्षण, आदि गर्न सक्नुहुन्छ। यो कम तनावपूर्ण छ र यसले समय बचत गर्दछ। रूपान्तरणको संख्या मापन गर्दा तपाईंको क्लाइन्टले तपाईंको एसईओ रणनीतिको प्रत्यक्ष परिणामको रूपमा प्राप्त गर्दछ मापन सफलताको सबैभन्दा अभिन्न अंग हो। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, रूपान्तरणहरू ती लिडहरू हुन् जसले अभियानको कल टु एक्सन (CTA) पूरा गर्यो, जेसुकै होस्। रूपान्तरणहरू गणना गरिन्छ जब एसईडीबाट तपाईंको ग्राहकको वेबसाइटमा नेतृत्व आउँदछ र केही प्रकारको कार्य गर्दछ, खरीद गर्नुहोस् वा तपाईंको सम्पर्क फारम भर्नु जस्ता। तपाईं Semalt को DSD को साथ अधिक र अधिक मापन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
SEO रिपोर्ट उत्पन्न गर्नुहोस्
एसईओ रिपोर्टहरू उत्पन्न गर्न कठिन प्रक्रिया हुन सक्छ विशेष गरी यदि तपाईं धेरै वेबसाइटहरू ह्यान्डल गर्दै हुनुहुन्छ भने। ठिक छ, तपाइँ अब SEO कठिनाइहरू उत्पन्न गर्न को लागी परेशानीहरू पार गर्नुपर्दैन; Semalt को डीएसडी तपाईको लागि यहाँ छ। यो ड्यासबोर्ड व्यक्तिगत रूपमा तपाइँको प्रत्येक ग्राहकहरु को लागी रिपोर्ट वितरण कार्यक्रम बनाएर कार्य गर्दछ। यसको साथ, तपाईं प्रत्येक ग्राहकलाई आफ्नो लोगो र ब्रान्ड नामको साथ अनुकूलित व्यापक SEO रिपोर्टहरू डेलिभर गर्न सक्नुहुनेछ।
Se. Semalt DSD का कम्पोनेन्टहरू
ए विश्लेषक उपकरण
SERP डाटा (शीर्षमा कुञ्जी शब्दहरू; उत्तम पृष्ठहरू; प्रतिस्पर्धीहरू)
एक SERP डाटा विश्लेषण उपकरण एक हो जुन तपाईलाई गुगलमा तपाईको स्तर निर्धारण स्थितिमा मद्दत गर्न सक्छ। यो उपकरणले गुगलका आन्तरिक स्रोतहरू साथै बाह्य तेस्रो-पार्टी स्रोतहरूबाट तपाईंको वेबसाइटहरू सम्बन्धमा एसईओ डाटा स .्कलन गर्दछ। यसले तपाईंलाई जानकारीको संग्रहलाई फिल्टर गर्ने विकल्प दिन्छ र यो पृष्ठहरूको आफ्नै सेटलाई विश्लेषण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। र हो, यसले वास्तविक-समय जानकारी प्रदान गर्दछ।
यो उपकरणले तपाइँलाई तपाइँको शीर्ष-श्रेणीगत पृष्ठहरूमा विस्तृत डेटा दिन्छ, किवर्डहरू जुन तपाइँको साइटले Google कार्बनिक खोज परिणामहरूमा, क्रमबद्ध पृष्ठहरू, र एक विशेष खोजशब्दको लागि तिनीहरूको SERP स्थिति दिन्छ। यो उपकरण विशेष रूपमा पृष्ठहरूबाट जानकारी स collecting्कलनको लागि डिजाइन गरिएको थियो। उपकरण एकदम प्रयोगकर्ता मैत्री र बुझ्नको लागि सजिलो भएकोले दिईएको जानकारीको आधारमा तपाईंको वेबसाईटको प्रदर्शन सुधार गर्ने यो उत्तम तरिका हो।
Semalt वेबपृष्ठ विश्लेषक तपाईंको साइटमा व्यक्तिगत वेबपृष्ठहरू कसरी गरिरहेको छ भनेर फेला पार्न प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ धेरै व्यापार प्रतिस्पर्धा बाहिर छ र प्रतिस्पर्धा माथि उभिनको लागि, तपाईले आफ्नो वेबपेजको प्रदर्शनको साथै प्रतिस्पर्धाहरूको प्रदर्शन र गतिविधिहरूको सही विश्लेषण गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ। वेबपृष्ठ विश्लेषकले तपाईंलाई तपाईंको वेबपेजहरू कत्ति राम्रोसँग गरिरहेको छ, कुन वेबपेजहरूले सबैभन्दा धेरै यातायात उत्पन्न गरिरहेका छन् भन्ने बारे सचेत गराउँदछ। यसले तपाईंलाई वेब पृष्ठहरूमा कति लिंकहरू अवस्थित रहेको बताउँदछ, जहाँ ती लिंकहरू अवस्थित छन् र लंगर पाठहरू तिनीहरू संलग्न छन्। साइटमा वेब पृष्ठहरूको एक डाइरेक्टरी पनि छ, त्यसैले तपाईं उही सामग्री भएको सबै साइटहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। वेबपेज विश्लेषकले विभिन्न तथ्या are्कहरू राख्दछ जुन वेब पृष्ठहरूसँग सम्बद्ध छन् जति सक्दो सही र अप-टु-डेट सम्भव भएसम्म राख्नको लागि विकसित गरिएको थियो।
पृष्ठ गति विश्लेषक तपाइँको वेबसाइट को वास्तविक लोडिंग गति निर्धारित गर्दछ। तपाईंको पृष्ठको लोडिंग गतिले तपाईंको ट्राफिकमा प्रभाव पार्छ। यो किनभने मानिसहरूले ढिलो वेबसाइट लोड गर्न लामो समय पर्खने छैन। साथै, ढिलो पृष्ठहरूमा उच्च बाउन्स ब्याक रेट छ जुन ट्राफिक र रैंकिंगलाई असर गर्दछ। यदि तपाईंको साइट लोड गर्न लामो समय लिन्छ, यो गम्भीर समस्याको संकेत हुन सक्छ। यसको अर्थ यो हुन सक्छ कि त्यहाँ धेरै तत्वहरू छन् जुन पृष्ठमा थप्न आवश्यक छ र यी आईटमहरूले प्रक्रिया ढिलो गर्नु हुँदैन। तपाईं सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ जहाँ समस्याहरू छन् र आवश्यक समायोजनहरू गर्नुहोस्। यो उत्तम तरीकाले तपाईको वेबसाइटलाई राम्रोसँग चलाउन सकिन्छ र थोरै डाउनटाइमको साथ।
पृष्ठ गति विश्लेषकले पृष्ठ लोड गर्न लागेको समय जाँच गरेर काम गर्दछ। यसले त्यसपछि प्रत्येक पृष्ठ लोड हुन कति समय लाग्छ गणना गर्दछ। तपाईं प्रत्येक पृष्ठ द्वारा लिएको समयको औसत रकम देख्न सक्नुहुन्छ। उच्च लोड गति, तपाईंको साइट प्रदर्शन राम्रो छ। यो एक संकेतक हो कि तपाईं आफ्नो साइट को डिजाइन सुधार गर्न आवश्यक छ यदि तपाईं आफ्नो साइटमा आगन्तुकको संख्या बढाउन चाहानुहुन्छ।
चोरी साहित्य जाँचकर्ता
चोरी साहित्य जाँचकर्ता तपाईंको सामग्री र तपाईंको वेबसाइटको अन्य क्षेत्रहरू सम्भावित चोरीको लागि विश्लेषण गर्न डिजाइन गरिएको हो। यस परीक्षकको प्रयोग गरेर तपाई संख्याको संख्या निर्धारण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ तपाईंले वास्तवमै अर्को व्यक्तिको सामग्री प्रतिलिपि गर्दै हुनुहुन्छ। तथ्य यो हो कि गुगल मायालुपूर्वक चोरी चोरी गर्दैन। यदि Google बट्सले पत्ता लगायो कि तपाईंको सामग्री मूल छैन भने, तपाईंलाई सजाय दिइनेछ। तपाईंको वेबपेज उच्च रैंकिंग रोक्छ र तपाईं ट्राफिक गुमाउन लाग्नुहुन्छ। तपाईलाई सचेत पनि नहुन सक्छ कि तपाईको सामग्रीको केहि टुक्राले एपीमेन्ट गर्यो। तपाईंको अचेतताको बावजुद, यसले तपाईंलाई प्रभाव पार्छ। यसैले तपाईं केवल चोरी चोरी जाँचको प्रयोग गर्नु पर्छ। यदि तपाईं अभ्यासको विशाल प्रशंसक हुनुहुन्न भने पनि, यसलाई हटाउनु महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईं खोजी ईन्जिनहरूमा आफ्नो क्रम कायम राख्न चाहनुहुन्छ भने।
बी। व्हाइट लेबल
सी। रिपोर्ट केन्द्र
दुबै प्रकारका रिपोर्टहरू पीडीएफ र CSV ढाँचाहरूमा डाउनलोड गर्दै
D. ईमेल सूचनाहरू
१ interface इन्टरफेस भाषाहरू छनौट गर्नका लागि
अर्को भाषा स्थानीयकरण अनुरोधमा उपलब्ध छ
चाहे तपाइँ केवल आफ्नो वेबसाइटको स्वामित्व राख्नुहुन्छ वा तपाइँ धेरै वेबसाइटहरू प्रबन्ध गर्ने एसईओ विशेषज्ञ हुनहुन्छ, तपाइँलाई चाहिन्छ भन्नेमा कुनै श .्का छैन Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्ड। विशेष गरी यदि तपाइँ तपाइँको एसईओ-सम्बन्धित विश्लेषण र अनुगमन सम्पन्न गर्न तनावमुक्त तर प्रभावकारी तरिका खोज्नुहुन्छ भने, Semalt को डीएसडी तपाईलाई चाहिने भनेको हो। तपाईं सजिलैसँग तिनीहरूको समर्थन टोलीमा पुग्न सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।